Arabo (vahoaka) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Arabo)
Ny Arabo dia vahoaka semita miteny arabo sady manana kolontsaina arabo avy ao amin' ny Saikanosin' i Arabia ka miparitaka ao Afrika Avaratra sy ao Atsinanana Afovoany ary ao amin' ny Saikanosin' i Arabia.
1 Ny fiteny arabo
2 Ny fivavahan' ny Arabo talohan' ny silamo
2.1 Ny pôliteisma sy ny henôteisma arabo
2.2 Fivavahana abrahamika
2.3 Fivavahana iraniana
Ny fiteny araboHanova
Ny fiteny arabo dia fiteny semitika tenenina ao avaratr' i Afrika sy any Azia Andrefana. Raha atambatra ny olona miteny arabo eo amin' ny firenena rehetra izay lazaina fa miteny arabo ôfisialy, dia eo amin' ny 240 000 000 eo ho eo. Ny boky masin' ny silamo, ny Kor'any, izay nosoratana tamin' ny teny arabo, no manome lanja io fiteny io eo anivon' ny vahoaka mozilmana eran-tany. Samihafa ny fiteny arabo an-tsoratra sy ny fiteny arabo tenenina.
Ny fivavahan' ny Arabo talohan' ny silamoHanova
Ny fivavahana tao Arabia talohan' ny fivavahana silamo dia nahitana fivavahana amin' andriamanitra maro, fisafidianana andriamanitra iray amin' ny maro hivavahana, ny fivavahana kristiana, ny jodaisma ary fivavahana iraniana maro. Nisy koa ireo fivavahana hafa izay tsy dia be mpanaraka.
Ny pôliteisma sy ny henôteisma araboHanova
I Hubal no andriamanitra lehibe indrindra sady rain' ny andriamani-bavy telo (Al-Lāt, Al-‘Uzzá, Manāt). Ny sarivongan' i Hubal dia nitsangana tao akaikin' ny Kaaba ao amin' ny tanànan' i Maka. I Al-Lāt dia nivavahan' ny Arabo tao Maka, izay nanaovany sarivongana vato tao Taif. I Al-‘Uzzá dia andriamani-bavin' ny fahavokarana, nivavahana tao Maka koa, izay ninoana fa miaro sady miantoka ny fandresena amin' ny ady ifanaovany amin' ny firenena na foko hafa fahavalony. I Manāt no andriamanitry ny vintana, izay nanana sarivongana tao akaikin' i al-Mushallal any Qudayd, eo anelanelan' i Medina sy i Maka.
Ny kristianosma firehana nestoriana dia hita tao avaratra-atsinanana sy tao amin' ny Helodrano Persika. Ny nestorianisma dia fampiam-pinona izay milaza fa misy persôna sy natiora roa miara-misy ao amin' i Jesoa Kristy ka ny voalohany persôna sy natiora araka an' Andriamanitra fa ny faharoa dia persona sy natioran' olombelona.
Ny Saikanosin'i Arabia dia nandray koa ireo Jiosy mpifindra monina hatramin' ny Vanimpotoana Rômana, izay nampian' ireo mponina tompon-tany niova ho amin' ny jodaisma.
Ny zôrôastrisma dia hita tao amin' ny tapany atsinanana sy atsimon' i Arabia. Toraka izany koa ny mazdakisma sy ny manikeisma. Ny zôrôastrisma dia fivavahana monoteista manao an'i Ahora Mazda no anaran’ ny andriamaniny sady manindry mafy ny fifanoheran’ ny herin’ ny tsara amin’ ny herin’ny ratsy (doalisma). Ny mazdakisma dia fivavahana gnôstika mananandratra ny fananana iombonana; inoany ny fisian' ny foto-javatra roa mifanohitra: ny Tsara (Fahazavana) sy ny Ratsy (Haizina). Ny manikeisma dia fivavahana fifangaroan' ny zôrôastrisma sy ny bodisma ary ny kristianisma; izay mampianatra ny fizaràny izao rehetra izao ho roa (doalisma), ahitana ny fanjakan' ny Tsara, izay anjakan' Andriamanitra, sy ny fanjakan' ny Ratsy, izay anjakan' i Satana.
Saikanosin' i Arabia
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabo_(vahoaka)&oldid=1043346"
Dernière modification le 26 Janoary 2022, à 17:56
Voaova farany tamin'ny 26 Janoary 2022 amin'ny 17:56 ity pejy ity.